Mogadishu Journal » Haweenka maamulka Puntland oo dadaal ugu jiro sidii ay usoo dhacsan lahaayeen qoondadooda?
Mjournal :-Deegannada kala duwan ee maamulka Puntland ee dalka Soomaaliya waxaa ka socota howsha xulista xildhibaannada,haweenka ayaa si weyn ugu loolamaya sidii ay ugu soo bixi lahaayeen xulista xildhibaanada.
Shirar kala duwan oo lagu qabtay magaalooyinka waaweyn ee Puntland waxaa si aad loogu arkayay rag badan oo u hanqaltaagayo inay kamid noqdaan baarlamaanka.
Haweenka ayaa dadaal ugu jiraa sidii ay xubno badan uga heli lahaayeen baarlamaanka Puntland isla markaasna ka codsanaya odeyaasha inaysan ka tegin marka ay beeshooda usoo xulayaan xildhibaan matala.
Ijaabo Xoosh Gaashaan oo kamid ah haweenka halganka ugu jiro sidii ay usoo dhacsan lahaayeen qonddadooda ayaa BBC-da u sheegtay inay caqabado ku hor gudban yihiin waddadii ay ku gaari lahayd damaca ah inay xildhibaan noqoto.
Ijaabo oo u tartameysa mid kamid ah xubnaha baarlamaanka gobolka Nugaal waxay sheegtay in ‘Caqabadaha haysta ay kamid tahay in dumarka aanan wax badan loo ogolayn, dumarkana ay kaalin weyn ka hayaan horumarka bulshada’.
Markii la aasaasay maamulka Puntland sannadkii 1998-dii, tirada haweenka ku jiray baarlamaanka waxay ahayeen 5 gabdhood, baarlamaanka hadda haweenka waxay ku leeyihiin 2 xubnood oo kaliya ah.
Axmed Burhaan Daahir oo ah cilmi baare ku sugan magaalada Garowe ayaa BBC-da u sheegay in maamulka laga doonayo inuu sameeyo xeer qeexayo jagooyinka siyaasadda ragga iyo dumarka.
Wuxuuna ku dhiiro geliyay haweenka Puntland inay xiriir dhaw la yeeshaan odeyaasha soo xulayo xubnaha baarlamaanka u matalayo beelahooda si ay helaan qoondadooda.
Madaxweyanaha Puntland ,CabdiWeli Maxamed Cali Gaas ayaa bishii hore soo saaray bayaan uu kaga codsanayo odeyaasha dhaqanka in boqolkiiba 30 kuraasta xildhibaannada ay guddoonsiiyaan haweenka marka ay xulidda sameynayaan.
Xulista xildhibaannada waxaa hareer socdaa olole ay wadaan musharraxiinta ku loolamaya xilka madaxtinimada Puntland doorashada 2019-ka.
Iyadoo aysan dhici doonin doorasho qof iyo cod ah, xildhibaanada ayaa lagu soo xulanaya nidaamka awood qeybsiga beelaha kuwaaso soo dooran madaxweyne.